Ogaden News Agency (ONA) – Xiisadii Magaalada Diri-Dhabo oo Kasii Daraysa.
Xiisadii Magaalada Diri-Dhabo oo Kasii Daraysa.
Warar isdaba joog ah oo naga soo gaadhaya magaalada Diridhabo ayaa tibaaxaya in wali xaaladdu kacsan tahay kaddib rabshadihii shalay subixii ka qarxay magaalada.
Warkan ayaa intaas ku daraya in xaaladdu ay haatan cakiran tahay, kaddib markii dhowr guri oo ay deganaayeen dad Soomaali ah dab la qabadsiiyay. Dadka deegaanka ayaa saxaafada u sheegay in dad ku sugnaa guryahooda oo haween iyo caruur u badan dab la qabadsiiyay halkaasina ay ku geeriyoodeen.
Qoysas badan oo Soomaaliyeed ayaa guryahoodii iskaga qaxay kadib markii ay la kulmeen weerar aan kala joogsi lahayn oo lala beegsanayo dhamaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Diridhabo. Xaafado ay Soomaalidu leeyihiin ayaa la boobay wixii hanti ahaa ee tiilay.
Illaa iyo haatan waxaa la sheegaya in 17 qof oo Soomaali ah oo dumar iyo caruur u badan ay ku dhinteen rabshadaha ka soconaya magaalada Diri-dhabe. Dadka deegaanka ayaa ka cabsi qaba sida ay xaaladdu noqoneyso saacadaha soo socdo. Majiraan wax gurmad ah oo gaadhay magaalada Diridhabo tan iyo wakhtigan xaadirka ah.